Semuenzaniso Kambani Yemagariro Media Nongedzo | Martech Zone
Semuenzaniso Kambani Yemagariro Media Nongedzo
Mugovera, Kukadzi 7, 2015 Mugovera, Mbudzi 28, 2015 Douglas Karr
Ndichiri kutsvagurudza pamusoro pebhuku iri, ndakaitika pane ino yakanaka shoma yegoridhe kubva Shift Kutaurirana PR kwakapetwa blog… a Top 10 Social Media Guidelines. Vanoiisa kunze uko uye havadi kupihwa kupihwa chero kwekushandisa kwekutengesa.
Wepamusoro gumi Nongedzo dzeSocial Media Kutora chikamu ku [Kambani]
Aya marongero anoshanda kune [Kambani] vashandi kana makondirakiti vanogadzira kana vanopa kumablog, mawiki, masocial network, chaiwo nyika, kana chero imwe mhando yeSocial Media. Kunyangwe iwe ukapinda muTwitter, Yelp, Wikipedia, Facebook kana Google+, kana kutaura pane zvepamhepo midhiya mablog, izvi zvinongedzo ndezvenyu.
Kunyange vese vashandi [veKambani] vakagamuchirwa kuti vatore chikamu muSocial Media, isu tinotarisira kuti munhu wese anotora chikamu mutsananguro yepamhepo kuti anzwisise uye nekutevera aya akareruka asi akakosha mirawo. Iyi mitemo inogona kunzwika kunge yakaoma uye iine imwe yepamutemo-kurira mazwi asi ndapota ramba uchifunga kuti kwedu kwese chinangwa chiri nyore: kutora chikamu online nenzira inoremekedza, inoenderana iyo inochengetedza mukurumbira wedu uyezve ichitevera tsamba nemweya wemutemo. .
Buda pachena uye utaure kuti unoshanda ku [Kambani]. Kuvimbika kwako kunozoonekwa mune Yemagariro Media nharaunda. Kana iwe uri kunyora nezve [Kambani] kana mukwikwidzi, shandisa zita rako chairo, uone kuti unoshandira [Kambani], uye nyatsojekesa nezve rako basa. Kana iwe uine kufarira kupihwa kwauri kukurukura, tanga wadaro.
Usambozvimiririra iwe kana [Kambani] nenzira yenhema kana inotsausa. Zvese zvirevo zvinofanirwa kuve zvechokwadi uye zvisiri kutsausa; zvese zvirevo zvinofanirwa kusimbiswa.
Tumira zvinorehwa, zvine ruremekedzo? mune mamwe mazwi, ndapota, hapana spam uye hapana zvirevo zviri kure-musoro kana zvinogumbura.
Shandisa njere uye neruremekedzo rwakajairika: semuenzaniso, zvakanaka kukumbira mvumo yekutsikisa kana kushuma pamusoro penhaurirano dzinoitirwa kunge dzakavanzika kana zvemukati ku [Kambani]. Ita shuwa kuti kuedza kwako kujekesa hakutyore zvakavanzika zve [Kambani], zvakavanzika, uye gwara repamutemo rekutaura kwekunze kwekutengesa.
Namatira kunharaunda yako yehunyanzvi uye unzwe wakasununguka kupa yakasarudzika, maonero emunhu pane zvisiri zvakavanzika zviitiko ku [Kambani].
Paunenge usingawirirane nemaonero evamwe, zvichengete zvakakodzera uye zvine hunhu. Kana iwe ukazviwana uri mumamiriro ezvinhu epamhepo anotaridzika kunge ari kuramba kupokana, usanyanya kuzvidzivirira uye usazoregedze kubva mukutaurirana nekukurumidza: inzwa wakasununguka kubvunza PR Director kuti vapiwe mazano uye / kana kurega kubva panhaurirano zvine mutsigo maitiro anoratidza zvakanaka pa [Kambani].
Kana iwe uchida kunyora nezve makwikwi, ita shuwa kuti iwe unozvibata zvine hukama, uine chokwadi chakatwasuka uye kuti une mvumo yakakodzera.
Ndokumbirawo usambo taura chero chinhu chine chekuita nenyaya dzemutemo, kumhan'ara, kana chero mapato [Kambani] angave ari kukakavara ne.
Usambofa wakatora chikamu muSocial Media kana iwo musoro wenyaya uri kukurukurwa ungafungidzirwa semamiriro ezvinhu enhamo. Kunyangwe asingazivikanwe makomendi anogona kuteedzerwa kumashure kune yako kana [Kambani] kero ye IP. Regedzera zvese zveSocial Media zviitiko zvematambudziko kuPR uye / kana wezveMutemo Director.
Iva akangwara nezvekuzvidzivirira, kuvanzika kwako, uye ruzivo rwe [Company] rwakavanzika. Izvo iwe zvaunoburitsa zvinowanikwa zvakanyanya uye zvichave zviripo kwenguva yakareba, saka funga zvirimo nokungwarira. Google ine ndangariro refu.
ONA: Mainstream midhiya mibvunzo inofanira kuendeswa kuna Director weRuzhinji Hukama.
Tags: social media mushandi mirayiridzomagariro enhaumagariro enhau anotonga
Kukadzi 8, 2010 na5: 15 PM
Drew akaisa rakakura runyorwa rweSocial Media marongero kubva kumakambani futi. http://bit.ly/bxKpbP